Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း)
Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
နားအတွင်းပိုင်း သာမန်ထက်များလာတဲ့အရည်တွေရဲ ဖိအားကြောင့် တဖြည်းဖြည်းနားလေးလာပြီး ခေါင်းမူးခြင်းနှင့်နားအူခြင်းတို့ ဖြစ်သောရောဂါ အတွက်သုံးပါတယ်။
Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ရေလုံလုံလောက်လောက် (တစ်ဖန်ခွက်စာ) နဲ့အတူ တစ်ခုလုံးမျိုချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစာနဲ့တွဲပြီး သို့ အစားစားပြီးသောက်သင့်ပါတယ်။
Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ဖို့ ရေချိုးခန်းရေခဲသေတ္တာစတာတွေထဲမှာ မသိမ်းသင့်ပါဘူး။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း သေချာသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Betaserc® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အနေအထားပြောင်းသွေးပေါင်ကျခြင်း ( ထိုင်နေရာမှ လဲလျောင်းနေရာမှ ရုတ်တရက်ထလိုက်ခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်ရုတ်တရက်ထိုးကျခြင်း)
ဘယ်ဆေးတွေက Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
• Cetirizineနဲ့ အခြားသောဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Phaeochromocytoma ( အဒရီနယ်ဂလင်းဆိုင်ရာအကျိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သွေးပေါင်တက်ခြင်း)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တစ်နေ့သုံးကြိမ် 8 mg
ကလေးတွေအတွက် Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Betaserc (ဘီတာဟစ်တင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား 8mg, 16mg, 24mg
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 16, 2017